Ikhaya leHolide elitofotofo eWaimes elineSauna kunye neGadi
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguBelvilla
Eli khaya leholide linegadi eWaimes ibisetyenziswa njengekhefi yelali kwaye yalungiswa ngokupheleleyo. Ikhaya elilungele iintsapho ezijonge ikhaya elivulekileyo nelipholileyo leholide. Indawo yokuhlala enemibala ilungele ukusingatha iintsapho ezinkulu kunye nabantwana okanye amaqela amakhulu.
Abanini bahlala kwifama kufuphi nekhaya leeholide, apho unokuya kuthenga amaqanda amatsha, ubisi kunye nenyama. Amachibi aseRobertville kunye neBütgenbach akufutshane nendawo yokuhlala, kunye neendawo ezikhangayo zabakhenkethi iMalmedy kunye neStavelot.
Le ndlu inegumbi lokuhlala elinesitovu seenkuni, ikhitshi elinetafile enkulu yokutyela kunye negumbi lokuhlambela. Igumbi lokuzonwabisa libonelela ngokuzonwabisa kuyo yonke inkampani. Kubakhenkethi abafuna ukuphumla kukho i-sauna ye-infrared kunye nebhedi yokutshisa. Igadi inethafa enebarbecue, apho ungonwabela khona iingokuhlwa zasehlotyeni ezishushu ngeentsuku ezinelanga.
Isikhululo seenqwelomoya saseSpa-La Sauvenière sikumgama weekhilomitha ezingama-30.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (Isango, Igumbi lokuhlala(iTV, isitovu(inkuni), indawo yokuhlala), Igumbi lokuhlala(indawo yokuhlala, iyunithi yestereo), Ikhitshi(unomathotholo, iketile yombane, itoaster, umpheki (iceramic), ihood, umatshini wekofu (iiphedi), i-oveni(i-oveni yokugezela), i-microwave, iwasha izitya, ifriji-isikhenkcisi, iBlender), indlu yangasese, indlu yangasese, igumbi lokuhlambela(ifriji-ifriji), indawo yokuphumla(ishawa, sauna ye-infrared), isitulo esiphezulu)
Kumgangatho woku-1: (igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini(ibhedi ephindwe kabini, i-TV, indawo yokuhlala), Igumbi lokulala elinegumbi lokuhlambela(ibhedi enamawele, ibhedi efakwe amawele), iTV, ishawa, isitya sokuhlambela, indlu yangasese), Igumbi lokulala enegumbi lokuhlambela(ibhedi enye(iduvethi, ishiti elifakelweyo), ibhedi ephindwe kabini(iduvet, iwele elifakwe amawele), iTV, ibhedi, ishawa, isitya sokuhlambela, indlu yangasese), igumbi lokuhlambela(ishawa, isitya sokuhlambela, indlu yangasese))
Kumgangatho wesibini: (igumbi lokulala(2x ibhedi eyodwa(iduvet, ishiti elifakelweyo))
ithala (30 m2), igadi(yabucala, ibiyelwe ngokuyinxenye, 275 m2), ifenitshala yegadi, iBBQ, 5x yokupaka
Umbuki zindwendwe ngu- Belvilla
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Waimes